China 300w Polycrystalline Solar Module ထုတ်လုပ်သူနှင့် ရောင်းချသူများ - Rixing Electronics
polycrystalline silicon ဆိုလာဆဲလ်များ၏ ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်သည် monocrystalline silicon ဆိုလာဆဲလ်များနှင့် ဆင်တူသော်လည်း polycrystalline silicon ဆိုလာဆဲလ်များ၏ photoelectric ပြောင်းလဲခြင်း စွမ်းဆောင်ရည်မှာ များစွာ နိမ့်ကျပြီး၊ ၎င်း၏ photoelectric ပြောင်းလဲခြင်း ထိရောက်မှုသည် 16% ခန့်ဖြစ်သည်။
ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်အရ 300w Polycrystalline solar Module၊ ၎င်းသည် monocrystalline silicon ဆိုလာဆဲလ်များထက် စျေးသက်သာပြီး၊ ပစ္စည်းသည် ထုတ်လုပ်ရန် ရိုးရှင်းသည်၊ ပါဝါသုံးစွဲမှုကို သက်သာစေပြီး စုစုပေါင်းထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်လည်း နည်းပါးသောကြောင့် ၎င်းကို ပမာဏများစွာဖြင့် တီထွင်ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။
300w Polycrystalline နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး Module
ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူ၏အမြတ်အစွန်းကိုအာမခံရန်အတွက် 300 Polycrystalline solar Module 300 ကို 25 နှစ်ကျော်အလုပ်လုပ်ရန် အာမခံနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ modules များသည် 25 နှစ်ကြာအလုပ်လုပ်ပြီးနောက် power depreciation ထက် 20% လျော့နည်းကြောင်း သက်သေပြခဲ့သည်။300 Polycrystalline solar Module တွင် PID Free ပါရှိပြီး၊ သာလွန်သောဒီဇိုင်း- မော်ဂျူး၏စွမ်းဆောင်ရည်သည် အဖြူရောင် EVA ဖြင့် 20.24% အထိရှိပြီး ပါဝါခံနိုင်ရည်ရှိမှု od module သည် 0+-5W ဖြစ်သည်။
ပါဝါအထွက် Pmax Wp 285 290 295 300
Pmax တွင် ဗို့အား V mpp V 32.1 32.3 32.5 32.7
Pmax တွင် လက်ရှိ စစပါခင်ဗျာ။ V 8.88 8.98 9.08 9.18
အဖွင့်-ဆားကစ်ဗို့အား Voc A 39.17 39.41 39.65 39.89
တိုတောင်းသောလျှပ်စီးကြောင်း Isc A 9.4 9.5 9.61 9.71
Module E ciency Eff % 17.15 17.45 17.75 18.05
ဆိုလာဆဲလ် (အရေအတွက်/ပစ္စည်း/အတိုင်းအတာ)၊ 120(6*10+6*10)၊ polycrystalline၊ 156.75*156.75mm/158.75*158.75mm
မော်ဂျူးအတိုင်းအတာများ (L/W/H) 1675*992*35mm/1695*1002*35mm
1. ကုန်ကျစရိတ်သက်သာခြင်း၊300 Polycrystalline solar Module သည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ပရိုမိုးရှင်းနှင့် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
2. 300 Polycrystalline နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး Module သည် အပူချိန်ကိန်းဂဏန်းပိုမိုမြင့်မားသည်၊ ဘက်ထရီ၏အပူထုတ်လွှတ်မှုကို လျှော့ချလိမ့်မည်၊
300 Polycrystalline solar Module မော်ဂျူးတစ်ခုရှိ ဘက်ထရီကြိုးတစ်ချောင်းရှိ ဘက်ထရီတစ်လုံးကို ဖုံးကွယ်သွားသောအခါ ဘက်ထရီသည် ဆားကစ်အတွင်း ပူအိုက်စပ်စပ်ဖြစ်လာပြီး မြင့်မားသောအပူချိန်များသည် မော်ဂျူးအား ပျက်စီးစေနိုင်သည်။ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုတွင် ဘက္ထရီကြိုးများ နှစ်ဆပိုများသောကြောင့်၊ ဆိုလိုသည်မှာ hot spot မှ အပူသည် ထက်ဝက်သာပူနေပြီး အောက်အပူသည် ပရိဘောဂကို ထိခိုက်မှုနည်းစေသောကြောင့် အပူခံနိုင်ရည်အား တိုးမြင့်လာစေပါသည်။ အသင်းတော်၏ဝန်ဆောင်မှုဘဝ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ 300 Polycrystalline solar Module တွင် TUV(EU), CE, ETL(USA), INMETRO(BR), FIDE(MX), CQC(CN), KS(KR) ,ISO အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များပါရှိသည်။
hot Tags:: 300w Polycrystalline Solar Module၊ လက်လီ၊ ဝယ်၊ စိတ်ကြိုက်၊ အစုလိုက်၊ အရောင်းအ၀ယ်လုပ်၊ တရုတ်၊ စျေးပေါ၊ စျေးသက်သာ၊ အသစ်ဆုံး၊ အရည်အသွေး၊ အဆင့်မြင့်၊ တာရှည်ခံ၊ ထိရောက်မှု၊ သန့်ရှင်းသောစွမ်းအင်၊ လိုင်းပိတ်၊ ဂရစ်၊ On Grid၊ TUV၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ စက်ရုံ၊ စတော့တွင်၊ အမှတ်တံဆိပ်များ၊ တရုတ်နိုင်ငံထုတ်၊ စျေးနှုန်းစာရင်း၊ CE၊ 25 နှစ်အာမခံ